🥇 ▷ Samsung Galaxy A90 5G: Xaashiyaha iyo faahfaahinta sanduuqa ✅
Samsung Galaxy A90 5G: Xaashiyaha iyo faahfaahinta sanduuqa
Liiska taleefannada mobilada ee la jaan qaadi doona 5G Networks waa inaad ku darto nooc kale oo dheeri ah. Waxaan tixraacnaa “Samsung Galaxy A90 5G”, taas oo lahaan lahayd tikniyoolajiyadas iyo waxyaabo badan oo dheeri ah.
Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay qayb suuq gayn ah ama meeleyn fudud, waa in shirkadda South Korea ay go’aansatay inay khalkhaliso qof walba maskaxda mareyso iyagoo muujinaya Waxyaabaha qaarkood ee ku saabsan “Samsung Galaxy A90 5G”. Midkood wuxuu ku jiraa sanduuqa xirmada. Waxaa jira qeexitaanno si gaar ah loo qeexay oo loogu talagalay aaladda, taas oo aan wax yar ku faahfaahin doono. Dhanka kale, waraaqaha darbiga kala duwan ee lagu rakibi lahaa warshadda ayaa sidoo kale la sii daayay.
Samsung Galaxy A90 5G: Faahfaahinta iyo waraaqaha darbiga lagala soo baxo si bilaash ah
Waxaan ku bilaabi doonaa qaybta ugu dambeysa ee waxa lagu xusay cinwaanka hore. Hadaad rabto inaad horay u hesho darbiyada “Samsung Galaxy A90 5G” Si aad ugu isticmaasho nooc kasta oo kale, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho iskuxirka hoose.
Waa inaan filaynaa inuu xiriirku lumin karo ansaxnimadiisa sidaa darteed, haddii aad xiisaynayso waa inaad soo degsataa hadda. Dhanka kale, marka xigta waxaan la wadaagi doonnaa sawirka ku faafaya shabakadda. Waxaa jira daabacadaha qeexida ugu muhiimsan ee barnaamijkan Android SmartPhone (Samsung Galaxy A90 5G).
Moodeelku wuxuu lahaan lahaa shaashad 6.7 inji ah oo leh HD oo dhan oo lagu daray xalka.
Waan isticmaali karayay processor-ka SnapDragon 855.
Xawaaraha xawaaraha dhaqsaha ah ee 5G waa inay lahaan lahayd Modem Qualcomm X50.
Waxay sidoo kale lahaan doontaa 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo kaydinta gudaha ah.
Dhinaca hore wuxuu lahaan lahaa 32 Mpx camera.
Dhinaca dambe waxay lahaan doontaa qayb kamarado ah kaamirooyinka (48 Mpx, 5Mpx iyo 8 Mpx).
Xilligan la joogo waa macluumaadka keliya ee aan gacanta ku hayno laakiin, waa la ballaarin doonaa marka ay maalmuhu sii socdaan. Annagu garan mayno qiimaha iibka sidoo kale wadamada ay gaari doonaan laakiin, haddii aan qiyaasi karno inaysan noqon doonin mid aad u rakhiis ah marka loo eego waxyaabaha kor lagu soo xusay.
Dheeraad ah, Qaabku wuxuu gaari doonaa oo keliya gobollada ay ka shaqeeyaan 5G shabakadaha waa la heli karaa. Taasi waxay xadidaysaa tiro cayiman oo dalal ah iyo hawl wadeenno taleefan ah.
Tip-ka Android ee maalinta oo laga yaabo inuu xiiseynayo